‘ကဗျာဆိုတာပြုလုပ်ခြင်း’ ကဗျာစာအုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ – zlkontempo
‘ကဗျာဆိုတာပြုလုပ်ခြင်း’ ကဗျာစာအုပ်နှင့် ပတ်သက်၍
Posted on July 13, 2013 | by zlkontempo
ဒီကဗျာစာအုပ်မှာ ပါရှိတဲ့ ကဗျာအများစုဟာ အဓိကအားဖြင့် metapoetry `မက်တာကဗျာ´ ဖြစ်ပါတယ်။ `ကဗျာအကြောင်း ကဗျာ´ပေါ့ဗျာ။ ကဗျာကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့။ ဘာတွေလဲဆိုတော့ ပင်မရေစီး ခေတ်ပေါ်ကဗျာအမျိုးအစား မဟုတ်တဲ့ အကြောင်း ၊ ကဗျာနဲ့ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန် ဘ၀အကြောင်း ၊ ကဗျာနဲ့ ဘာသာစကားအကြောင်းနဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နည်းအကြောင်း တွေပါပဲ။
၁။ ။ ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာ အမျိုးအစား မဟုတ်ခြင်းအကြောင်း
ဒီကိစ္စကရှင်းပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲက ကဗျာတွေဟာ ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာနဲ့ နောက်ခံကဗျာဗေဒချင်းကွဲပြားခြားနားတာ သိသာပါတယ်။ ဖတ်လိုက်ရင်ကို ပဲ ကွဲပြားခြားနားမှုကို တန်းသိလို့ရပါတယ်။ အဲဒီကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ပဲ ကဗျာဗေဒ ၊ ကဗျာအသိ အမြင်ဗဟုသုတဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု တွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ အဓိက သိသာထင်ရှားတဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုကတော့ ရေးသားဖွဲ့စည်းပြုလုပ်မှု ပုံသဏ္ဍာန်ပါပဲ။ ဒီလိုကွဲပြားခြားနား တဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်(ရေးသားဖွဲ့စည်းပြုလုပ်မှု) နဲ့ စိမ်းတဲ့ စာဖတ်သူအတွက် `ပြဿနာ´တော့ ဖြစ်မှာပါပဲ။ ယခင်ကလည်း မော်ဒန်/ခေတ်ပေါ် ကဗျာဟာ စိမ်းတဲ့စာဖတ်သူ (တွေ)ကို `ပြဿနာ´ဖြစ်စေခဲ့သလိုပါပဲ။ ဒါဟာ ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါ။
၂။ ။ ကဗျာနဲ့ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ဘ၀အကြောင်း
ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာဟာ ရေးသူရဲ့ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ဘ၀ကြီး Subjectivity တစ်ခုလုံးထက် sensibility အာရုံခံစားမှုနဲ့ feeling/emotion ခံစားမှုကိုဦးစားပေး/ဗဟိုပြုရေးသားဖွဲ့စည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၊ ဘယ်သူမဆိုရဲ့ စိတ်ပိုင်းဘ၀ (၀ါ) ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ဘ၀ မှာ ခံစားမှုတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ Knowledge သိမှု ဗဟုသုတအစုအဝေး ၊ Concepts & Ideas အတွေးထည်တွေနဲ့ အယူ အဆအစုအဝေး ၊ Memory အမှတ်သညာအစုအဝေး ၊ စတာတွေအပြင် Imagination စိတ်ကူးဖြန့်ကျက်မှု ၊ Way of thinking စဉ်းစား ပုံစဉ်းစားနည်း ၊ Perception အာရုံယူပုံယူနည်း ၊ Emplotment အတွေ့အကြုံအဖြစ်အပျက်တွေကို ဖွဲ့စည်းတည်ရှိရင်းစွဲဖြစ်တဲ့ I `မိမိ´ ၊ `မိမိအတ္တ´၊ `ငါ´ နဲ့ ဆက်လက်ပြီး ဆက်စပ်ပေါင်းစည်းတည်ဆောက်ပုံ (ဇာတ်လမ်းဖွဲ့ပုံ) တို့လည်းပါရှိပါတယ်။ မိမိစိတ်ထဲတည် ဆောက်ထားတဲ့ Interior Reality အဇျတ္တဘ၀လည်းရှိပါတယ်။ သိမှုတည်ဆောက်မှု ယုတ္တိဘောင်ကို ခုခံကျော်လွန်ပြီး ရှိမှုသရုပ် ထွက် ထွက်ပြတတ်တဲ့ မသိစိတ်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။
သိမှုဗဟုသုတအစုအဝေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဒီသိမှုတွေဘယ်ကလာသလဲ။ မိမိထံဘယ်လိုရောက်ရှိပြီး မိမိက ဘယ်လိုလက်ခံ တည်ဆောက်ယူသလဲ။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကလာတဲ့ လူမှုဆိုင်ရာ သိမှုတည်ဆောက်မှုတွေ ၊ မီဒီယာကလာတဲ့ သိမှုတည်ဆောက်မှုတွေ ၊ ပညာရပ်/ဘာသာရပ်နယ်ပယ်တွေကလာတဲ့ သိမှုတည်ဆောက်မှုတွေ။ ပြီးတော့ ၊ ကဗျာဆိုင်ရာသိမှုတည်ဆောက်မှု။
အတွေးထည်တွေ ၊ အယူအဆတွေဟာလည်းသိမှုရဲ့ အစိပ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပေမယ့် သိမှုပေါ်ထပ်ချဲ့ထွင်တည်ဆောက်ယူတာ တွေဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံသိမှုအဆောက်အအုံပေါ်ထပ်ချဲ့ထွင်တည်ဆောက်ယူထားတဲ့ ဒုတိယသိမှုအဆောက်အအုံလို့လည်းပြောလို့ရ ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ concept ပိုင်း ၊ idea ပိုင်းတွေပါ။ ဒီအခြေခံသိမှုအဆောက်အအုံပေါ်ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဒုတိယသိမှုအဆောက်အအုံပေါ်ဖြစ် ဖြစ် imagination ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးဖြန့်ကျက်မှုဆိုတာလည်းရှိပြန်ပါသေးတယ်။ ကဗျာမှာ concept တွေ ၊ idea တွေကို တွေ့ကြုံခံစားမှု တွေနဲ့ ရောယှက်ဆက်စပ်ပေးတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ စိတ်ကူးမှု ၊ စိတ်ကူးဖြန့်ကျက်မှုဟာ အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါရှိနေပါတယ်။
ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ဘ၀နဲ့ ပတ်သက်လို့ `ငါ´/ `မိမိ´/`မိမိအတ္တ´/ ‘I’/Identity ဟာ ရိုးစင်းရှင်းလင်းစွာတည်ရှိနေတာမဟုတ်သလို မွေးရာပါလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆဂိုဏ်းတွေရှိကြပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးကတော့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ/ဗုဒ္ဓတရားတော်ပေါ့။ ဒီ `I´ဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှုဘ၀က ဖွဲ့စည်းတာ ၊ လူမှု-စီးပွားရေးဘ၀ကဖွဲ့စည်းတာ ၊ စတဲ့ပြင်ပ ပယောဂရဲ့ ပြဋ္ဌာန်းမှုကို လက်ခံကြတာရှိသ လို ဘယ်လိုသိမှုတတ်မှုပညာရပ်နဲ့မှ ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ `အတွင်းစိတ်´၊ `ဗီဇစိတ်´ ၊ `ပင်ကိုယ်စိတ်´ ၊ `အစစ်အမှန် မိမိ´ ၊ စတဲ့ အယူ အဆအသုံးအနှုံးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုကို အပြန်အလှန်ပေါင်းစပ်ယူတဲ့ ဂိုဏ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ၊ ကဗျာထဲက `ငါ´ ကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲ ၊ ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ ၊ ဘယ်လိုပြုလုပ်သုံးစွဲမလဲဆိုတဲ့ ကဗျာပြဿနာဟာလည်း ပေါ်လာပါတော့တယ်။ မေးခွန်းများစွာ တစ်ခုတည်းက အလွယ်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကို ထုတ်ပြပါဆိုရင် ကဗျာထဲက `ငါ´ဟာ မူလပကတိ အတိုင်းပြီးပြည့်စုံစွာ ရှိတဲ့ တစ်လုံးတစ်စည်းနဲ့ ဗဟိုအချက်အချာလား ၊ fragment တွေလာကပ်လိုက် ၊ ခွာလိုက် ၊ ပြန်ဖွဲ့စည်းလိုက်ဖြစ် နေတာလား။ ပန်းစင်္ကြာမှန်ပြောင်းထဲပါရှိတဲ့ ရောင်စုံအစအနလေးတွေဟာ တစ်ခါလှည့်လိုက်တိုင်း ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုအသွင်ယူဖွဲ့စည်း လိုက်တာမျိုးလား။
တစ်ဆက်တည်းပြောရရင် ကဗျာဟာ self – expression မိမိအတ္တ (ပုဂ္ဂလ) ခံစားမှုကိုဖေါ်ပြတာလား ၊ ဒါမှမဟုတ် တည် ဆောက်ထားတဲ့ မိမိအတ္တအပိုင်းအစတွေနဲ့ ပြောလိုရာကို ဖွဲ့စည်းပြတာလား။ အထက်ပါ Subjectivity တစ်ခုလုံးနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် ဒါဟာ ရိုးအ တဲ့ မေးခွန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ ၊ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဟာ ခံစားမှုဖေါ်ပြချက်ထက် စိတ်အခြေအနေတစ်ခုခု state of mind ကို ဖြတ်ကနဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ယူသလိုကောမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားပေါ့။ အတွေ့အကြုံကို အခြေမပြုပဲ စိတ်ကူး/အတွေးထည်ကို အခြေပြုပြီး ပြုလုပ်ဖန်တီးတာကော မဖြစ်ရဘူးလား။
၃။ ။ ကဗျာနဲ့ ဘာသာစကားအကြောင်း
ဒီကိစ္စက အငြင်းအခုန်ရဆုံး ၊ အငြင်းပွားစရာ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာလည်း ဘာသာစကားကို အကျဉ်းမြင်ပုံနဲ့ အကျယ်မြင်ပုံပေါ်ကွဲပြားခြားနားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားကို ဆက်သွယ်ရေးကြားခံမီဒီယံ medium of communication လောက်ပဲမြင်တာနဲ့ construction of social reality လူမှုဘ၀အရှိတရားတည်ဆောက်မှုနဲ့ construction of self မိမိအတ္တဘ၀တည် ဆောက်မှုတို့မှာ constitutive ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင် ၊ ကိုယ်တိုင်လည်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့ အမြင်အထိပေါ့။ ဒီ့အပြင် အဓိပ္ပါယ်တည်ဆောက်မှု ၊ အနက်/ကောက်မှုကိစ္စတွေ ၊ လူအဖွဲ့အစည်း (၀ါ) ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်တွင်း ဘာသာစကားနယ်ပယ်အမျိုး မျိုးတည်ဆောက်သုံးစွဲလည်ပတ်မှုတွေ ၊ ဘာသာစကားနဲ့ ပါဝါအာဏာကိစ္စတွေ။ ဒီဘာသာစကားနယ်ပယ်ကြီးကို လူမှုဘ၀နယ်ပယ်ကြီး လို့ သတ်မှတ်လက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလို လူမှုဘ၀နယ်ပယ်ကြီးထဲ ကျင်လည်ကျက်စားတဲ့ ကဗျာရဲ့ အနေအထား ကကော ဘယ်လိုရှိမလဲ။
၄။ ။ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်း
ဒီကဗျာစာအုပ်မှာပါရှိတဲ့ ကဗျာပုဒ်တွေပြုလုပ်ပုံဟာ ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာပုဒ်ပြုလုပ်ပုံနဲ့ တော်တော်လေးကွာခြားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ကဗျာမျက်နှာပြင် surface ပေါ်မှာပဲ ကဗျာရဲ့ ပြင်ညီအသားသဘော texture ကိုကြည့်ရင်သိသာပါတယ်။ သုံးစွဲတဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုံးတွေ ၊ တွဲချိတ်ပုံတွေ ၊ လိုင်းဖြတ်ပုံတွေ ၊ လိုင်းဖွဲ့ပုံတွေ ၊ လိုင်းချိတ်ပုံတွေ ၊ အနက်ပွားအောင်လုပ်ထားတာတွေ ၊ ပါရာတက် တစ်နည်းတွေ ၊ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ဆက်စပ်မှုကို တမင်ဖျက်တဲ့ disjunctive strategies ဒစ္စဂျန့်က်တစ်ဗ်နည်းတွေ ၊ တစ်လိုင်းနဲ့ တစ်လိုင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်မာခြင်းပျော့ခြင်း ၊ ဘာသာစကားနယ်ပယ်အမျိုးမျိုးက အသုံးအနှုံးရောစွက်မှုတွေ ၊ found language ကောက်ရ ဘာသာစကား ယူသုံးတာတွေ ၊ (Re)Writing ရှိပြီးသားအရေးအသားကို ပြန်ပြင်ရေးတာတွေ ၊ ကော်လာ့ဂ်ျတွေ ၊ ရှိပြီးသားကဗျာတွေကို echo ပဲ့တင်မြည်အောင်လုပ်တာတွေ ၊ ရှိပြီးသားကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ လှမ်းချိတ်ဖို့ reference ပြညွှန်းတာတွေ ၊ ဇာတ်လမ်းမဲ့ခြင်း ၊ ဗဟိုပြု `ငါ´မဲ့ခြင်း/ယိုင်နဲ့ခြင်း/အခြေတကျမရှိခြင်း။ အဓိက ကတော့ သစ်ပင်အတွေးအခေါ်လို ရေသောက်မြစ် တစ်ခုပင်စည်တစ်ခုအခြေပြုတာ ထက် Rhizome ရိုက်ဇိုးမ် အတွေးအခေါ်လို ထူးခြားပင်စည်တွေဖြာထွက်နေတဲ့ သဘောမျိုး ပိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်းတစ်လိုင်းစီ ဟာ အထက်မှာ ပင်စည် ၊ အောက်မှာ ရေသောက်မြစ်ဆီသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ တစ်လိုင်းစီဟာ သူ့အမြစ် ၊ သူ့ပင်စည် ၊ သူ့အတက် ဖြစ်နေတဲ့သဘောပါ။
ဒီကဗျာတွေဟာ ဖတ်ရခက်နေရင် ဖတ်လေ့ဖတ်ထမရှိလို့ စိမ်းနေတာပဲလို့ ယူဆလို့ရသလို ရှိရင်းစွဲသိရင်းစွဲကဗျာနဲ့ ကဗျာဗေဒ နဲ့ နာကြည်းနာကျင်စွာ ပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုတာတွေလည်း ရှိကောင်းရှိမှာပါပဲ။ ကြိုက်ခြင်း ၊ မကြိုက်ခြင်းဟာ အလေ့အကျင့်နဲ့ အစွဲ အလန်းကိစ္စလို့ပဲ ကျွန်တော်သဘောထားပါတယ်။ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ Subjectivity ကိစ္စကြီးကလည်းရှိနေသေးတာပဲလေ။ ပြီးတော့ လူ ၊ လူ့ဘ၀ ၊ လူ့လောက အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်ထားရှိ (တည်ဆောက်ထား)တဲ့ အမြင်နဲ့ ဒီကဗျာတွေရဲ့ ကို့လို့ကန့်လန့် နိုင်မှုတွေဟာ ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုးတွေ ဖြစ်စေမလဲပေါ့။
ဒါပါပဲဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ။
11 – April – 11
Posted in Articles, Poetry, Reviews | Tagged meta-poem
ခရေ့ဂ် ဒဝေါ်ကင်န်ရဲ့ LP ရှင်းလင်းချက်ထဲမှ ကောက်နှုတ်ချက်အချို့
One thought on “‘ကဗျာဆိုတာပြုလုပ်ခြင်း’ ကဗျာစာအုပ်နှင့် ပတ်သက်၍”
i wanna read new post .
Zeyar LYNN (poet, translator; Burma/Myanmar) is the author of more than twenty poetry collections. He is also one of the editors of Poetry World Quarterly. [ more ]
ပျူတွေ ပြူထွက်လာကြတယ် သူတို့အရိုးပြာအိုးတွေထဲက under Poetry
တရုတ်ခေတ်ပြိုင်ကဗျာဆရာ ယန်ကျွံ့ Yan Jun under Poetry, Reading
တခြားဟာပဲလုပ်ချင်တာနဲ့ ဂျက္ကဆင် မက္ကလိုး under Articles
ဖမိုးနဲ့ ဖမျက် under Poetry
ဘရန်(ဂ်)လို့ပဲ ခေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့ သူငယ်ချင်း under Poetry
Archives Select Month January 2018 (5) December 2017 (13) November 2017 (15) October 2017 (8) September 2017 (1) August 2017 (2) July 2017 (5) May 2017 (1) April 2017 (4) March 2017 (18) February 2017 (13) January 2017 (11) November 2016 (1) August 2016 (1) March 2016 (1) October 2014 (2) September 2014 (7) April 2014 (1) March 2014 (1) January 2014 (3) December 2013 (6) November 2013 (1) September 2013 (1) August 2013 (1) July 2013 (13) June 2013 (2) May 2013 (2) April 2013 (1) March 2013 (1) February 2013 (2) January 2013 (5) December 2012 (3) October 2012 (10) September 2012 (9) August 2012 (9) July 2012 (3) December 2011 (2) November 2011 (1) September 2011 (1) September 2010 (1) November 2009 (1) July 2009 (1) June 2009 (3) May 2009 (2) January 2009 (1) January 2008 (2)
Categories Select Category Articles (29) Info (9) Interview (1) News (5) Notes (46) Poetry (172) Prose (3) Reading (5) Reviews (5) Visual/ Concrete (1)
alvin pang american poetry Amy Gertsler Articles aussie poems bones will crow charles bernstein conceptual Conchitina Cruz concrete Contemporary Myanmar Poetry contemporary poetics Documentary Poetry English Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki hsia yu Info Interview IPNHK James Byrne James Galvin jameson fitzpatrick jericho brown karl popper Marek Wojdylo Maung Chaw Nwe News Notes of clocks and clouds Parnassus poetics Poetry poetry-parnassus Prose Reviews surrealism Talking About Poetry Tomas Salmun Tomaz Salamun translation uncreative visual yan jun ကိုချော ဘာသာပြန်
ပျူတွေ ပြူထွက်လာကြတယ် သူတို့အရိုးပြာအိုးတွေထဲက
lahyaung on ‘ကဗျာဆိုတာပြုလုပ်ခြင်း’ ကဗျာစာအုပ်နှင့် ပတ်သက်၍
© 2018 zlkontempo. All Rights Reserved.